आफ्नी आमा उत्कृष्ट भन्दैमा अरुको आमालाई बो*क्सी भन्न पाईन्छ ? भन्दै गर्जिए रमेस प्रसाईँ [भिडियो सहित] – दैनिक नेपाल न्युज
सामाजिक सञ्जालमा अहिले धरानका रमेश प्रसाई नाम निकै नै लोकप्रिय भइरहेको छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका उनले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्द छन् । भर्खरै मात्र पब्लिक स्पिकर सिजन २ मा उनले उपाधि जितेका छन् ।
बोल्नमा माहिर उनले रेडियो कार्यक्रमहरु तथा इन्टरनेट र पुस्तकहरू मार्फत देशविदेशका खबरहरु जानकारी लिने बताउँ छन् । उनी आफु बोल्न कै लागि जन्मेको बताउ छन् । समाजमा केहि घटना घट्दा उनी तत्काल आफ्नो विचार राख्ने गर्छन् । आफ्नी आमा राम्री भन्दैमा अरुको आमालाई बो*क्सी भन्न पाईन्छ ? भन्दै यसरि कड्किए रमेस प्रसाईँ भिडियोमा हेर्नुहोस: